मार्केटिङ क्लाउड: MobileConnect मा SMS सम्पर्कहरू आयात गर्न स्वचालन स्टुडियोमा कसरी स्वचालन सिर्जना गर्ने। Martech Zone
हाम्रो फर्मले भर्खरै एक ग्राहकको लागि Salesforce मार्केटिङ क्लाउड लागू गर्‍यो जसमा जटिल रूपान्तरण र संचार नियमहरू भएका एक दर्जन एकीकरणहरू थिए। जरामा थियो शॉपिफाई प्लस साथ आधार रिचार्ज सदस्यताहरू, सदस्यता-आधारित ई-वाणिज्य प्रस्तावहरूको लागि लोकप्रिय र लचिलो समाधान।
कम्पनीसँग एक अभिनव मोबाइल सन्देश कार्यान्वयन छ जहाँ ग्राहकहरूले पाठ सन्देश मार्फत आफ्नो सदस्यता समायोजन गर्न सक्छन् (एसएमएस) र तिनीहरूले आफ्नो मोबाइल सम्पर्कहरू MobileConnect मा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक छ। MobileConnect मा मोबाइल सम्पर्कहरू आयात गर्नका लागि कागजात हो:
मा आयात परिभाषा सिर्जना गर्नुहोस् निर्माणकर्तालाई सम्पर्क गर्नुहोस्.
मा एक स्वचालन सिर्जना गर्नुहोस् स्वचालन स्टुडियो.
एक जोड्नुहोस् आयात गतिविधि स्वचालन गर्न।
जब तपाइँ आयात गतिविधि कन्फिगर गर्नुहुन्छ, चयन गर्नुहोस् आयात परिभाषा तपाईंले सिर्जना गर्नुभयो।
अनुसूची र स्वचालन सक्रिय गर्नुहोस्.
त्यो एक साधारण 5-चरण प्रक्रिया जस्तो लाग्छ, हैन? वास्तविकता यो हो कि यो धेरै जटिल छ त्यसैले हामीले यसलाई कागजात गर्ने र यहाँ साझा गर्ने निर्णय गरेका छौं।
स्वचालन स्टुडियो प्रयोग गरेर MobileConnect मा तपाईंको मार्केटिङ क्लाउड मोबाइल सम्पर्कहरूको स्वचालित आयात गर्न विस्तृत चरणहरू
पहिलो चरण सम्पर्क बिल्डरमा तपाईंको आयात परिभाषा सिर्जना गर्दैछ। यहाँ यो गर्न को लागी चरणहरु को एक ब्रेकडाउन छ।
मा आयात परिभाषा सिर्जना गर्नुहोस् निर्माणकर्तालाई सम्पर्क गर्नुहोस् मा क्लिक गरेर सिर्जना सम्पर्क निर्माणकर्ता > आयातहरूमा बटन।
चयन गर्नुहोस् सूची जस्तो तपाईको लक्ष्य गन्तव्य इम्प्रोट को प्रकार तपाईले प्रदर्शन गर्न चाहानुहुन्छ।
चयन गर्नुहोस् स्रोत आयात गर्नुहोस्। हामीले अस्थायीबाट आयात गर्न रोज्यौं डाटा विस्तार जुन डाटासँग प्रिलोड गरिएको थियो।
घडी सूची चयन गर्नुहोस् र आफ्नो सूची छान्नुहोस् (हाम्रो अवस्थामा, सबै सम्पर्कहरू - मोबाइल)।
यी सम्पर्कहरूले सबै अप्ट-इन गरेका छन् र हामी तिनीहरूलाई MobileConnect मा स्थानान्तरण गर्दैछौं, त्यसैले तपाईंले यसमा सहमत हुनुपर्छ अप्ट-इन प्रमाणीकरण नीति.
तपाईंको आयात सूची स्तम्भहरू नक्सा गर्नुहोस् (हामीले सिर्जना गर्नुभयो डाटा विस्तार ContactKey सम्बन्ध पहिले नै स्थापित संग)।
आफ्नो गतिविधिलाई नाम दिनुहोस् र आफ्नो छनौट गर्नुहोस् एसएमएस कोड र एसएमएस किवर्ड.
विजार्ड पुष्टि गर्नुहोस् र क्लिक गर्नुहोस् समाप्त आफ्नो नयाँ गतिविधि बचत गर्न। सूचनाहरूका लागि आफ्नो इमेल ठेगाना थप्न निश्चित हुनुहोस् ताकि प्रत्येक पटक आयात परिणामहरूको साथ कार्यान्वयन गर्दा तपाईंलाई सूचित गरिनेछ।
तपाइँको आयात परिभाषा अब बचत गरिएको छ र तपाइँ यसलाई तपाइँको स्वचालनमा सन्दर्भ गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाइँ सिर्जना गर्न जाँदै हुनुहुन्छ स्वचालन स्टुडियो.
मा एक स्वचालन सिर्जना गर्न चरणहरू स्वचालन स्टुडियो धेरै स्पष्ट छैनन्। प्रयोग नगर्नुहोस् फाइल आयात गतिविधि। पत्ता लगाउनुहोस् SMS गतिविधि जहाँ तपाइँ प्रयोग गरेर गतिविधि थप्न सक्नुहुन्छ एसएमएस सम्पर्क गतिविधि आयात गर्नुहोस्.
एक जोड्नुहोस् आयात गतिविधि तपाईंले माथिको चरण 8 मा सिर्जना गर्नुभएको आयात परिभाषा चयन गरेर स्वचालनमा। तपाईंले विस्तार गर्न आवश्यक हुनेछ SMS फोल्डर जहाँ तपाईं आफ्नो देख्नुहुनेछ आयात परिभाषा.
अनुसूची र स्वचालन सक्रिय गर्नुहोस्। जब तपाइँको स्वचालन चल्छ, तपाइँको मोबाइल सम्पर्कहरू आयात गरिनेछ र तपाइँलाई चरण 8 मा इमेल ठेगानामा सूचित गरिनेछ।
यदि तपाईंलाई सहयोगको आवश्यकता छ भने, हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस् Highbridge। हामीले अन्य मोबाइल मार्केटिङ प्लेटफर्महरूबाट मोबाइल क्लाउडमा व्यापक कार्यान्वयन र माइग्रेसनहरू गरेका छौं।
टैग: स्वचालन स्टुडियोनिर्माणकर्तालाई सम्पर्क गर्नुहोस्सम्पर्क कुञ्जीआयात परिभाषा सिर्जना गर्नुहोस्डाटा विस्तारक्षेत्र मानचित्रणआयात परिभाषाआयात सूचीमोबाइल सूची आयात गर्नुहोस्मोबाइल ग्राहकहरू आयात गर्नुहोस्एसएमएस सम्पर्क गतिविधि आयात गर्नुहोस्मार्केटिंग क्लाउडमोबाइल सम्पर्कहरूमोबाइल स्टुडियोमोबाइल जडानअप्ट-इन प्रमाणीकरण नीतिरिचार्जरिचार्ज सदस्यताहरूबिक्री बलsfmcशॉपिफाई प्लसएसएमएसएसएमएस कोडएसएमएस कुञ्जी शब्दलक्ष्य गन्तव्य
किन डाटा क्लिन्जिङ महत्वपूर्ण छ र तपाइँ कसरी डाटा सफाई प्रक्रियाहरू र समाधानहरू लागू गर्न सक्नुहुन्छ